ALL ZANU PF PROVINCES BACK DECEMBER CONGRESS newsdzeZimbabweNewsdzeZimbabwe
ALL ZANU PF PROVINCES BACK DECEMBER CONGRESS
The party’s PCC members met at the provincial headquarters today afternoon, where the province’s chairman Cde Charles Tawengwa announced that the province has once again agreed to affirm President Mugabe as the presidential candidate next year.
Also, the Zanu PF leaders in Mashonaland Central Province converged in Bindura today to formalise their request forwarded to Zanu PF President and First Secretary Cde Robert Mugabe which called for a special extra ordinary congress that will look at the current challenges bedevilling the party to ensure that these are resolved.
At a meeting attended by Politburo and Central Committee members, members of parliament from Mashonaland Province, the Women’s League, war veterans and several party members and the Province Provincial Executive Council (PEC) for Mashonaland Central presented their agreed position to the National Political Commissar, Cde Saviour Kasukuwere.
Zanu PF Masvingo chairman, Cde Ezra Chadzamira reaffirmed the province’s support for President Mugabe to be the party’s sole candidate for 2018 general elections, sentiments that were also echoed by the party`s provincial spokesperson Cde Ronald Ndaba.
The Mashonaland East Zanu PF leadership has also joined other provinces in calling for the holding of an extraordinary session of congress.
Speaking to ZBC News, the provincial secretary for information and publicity, Cde Kenneth Mutiwekuziva said the congress is necessary to reaffirm the candidature of the First Secretary and President of the party, His Excellence Cde Robert Gabriel Mugabe as the sole candidate for Zanu PF in the coming 2018 presidential election among other issues.